SAADO KUMU QUDHINE INAAD SIIBATU RABAY • Oodweynenews.com Oodweyne News
SAADO KUMU QUDHINE INAAD SIIBATU RABAY
Shacabka somaaliland waxa wax u iftiin shey qofka kalmada hilaada ugu wan qalay 120ki cisho wax qabadki korneeyl muse bixi wuxu Si taban iyo si togan inoogu sheegay korneeylada iyo humaagoda hagardaamo hadii aan so koobo macnaha kalmada hilada, hadii ay amaantahay waxaad Ku maqli lahaayden suugaanta dumarka ama haweenka lagu amaano, sababto ah amaanta ugu qalisan waxaynu ku amaana haweenka,geela, iwm.
Macnaha Kalmada hilaadu ay sameeysa waa qiyaas wax ka fog,ama il ka cabiir daruuro ka fog oo bidhaan ka muqda halka uu ka da’aayo, hilad hadan so koobo macnaheedu wa qiyaas run iyo beena ama male awaal.
Qimaha iyo meeqaamka korneeyl muse bixina intaasa inagag filan,wixiisa oo dhan waxa uu ina fahansiyay ninka magaca hilaadshe u bixiyay korneeyl muse wuxu yahay.
((Karinba la isku cunana hayga hadho))waxaana meesha ka baxdey korneeyl muse wa dhaqan yaqaan wax cadaana hadii uu dhaqan yaqaano mu ogoladeen kalmada hilaada iskumana xayeeysiyen buugna laguma daabacen! Hilaad iyo wax qabadna waxay wadaagan oo aynu hore u maqaley ma jiro.
Alla Mahad iska leh
Qalinkii: Khadar Kaariye Cune